Inona no safidy tsara indrindra ho an'ny backlinks tranoko?
Ny rohy mankany amin'ny tranonkala fifaneraserana dia matetika no ekena ho toy ny fasana masin'ny hevitra maoderin'ny Search Engine Optimization. Midika fa ny backlinks amin'ny ankapobeny dia ny ampahany lehibe amin'ny fahombiazan'ny tranonkalanao amin'ny fitomboan'ny manampahefana, ary ny lazan'ny valin'ny fikarohana Google. Inona avy ireo rindran-kaonty amin'ny endriny amin'ny famaritana? Avy amin'ny fomba fijerin'ny SEO, ny rohy mankany aoriana dia rohy ivelany avy amin'ny tranonkala iray hafa izay manondro ny tranonkalanao manokana. Ny pejy voalohany dia pejy voalohany (voalohany) amin'ny tranokalanao. Mifototra amin'ny tontolon'ny fifandraisana - dia midika ho ny toerany voajanahary ao anatin'ny votoaty, tsy misy spam na sidebar toerana ahazoana.
Indreto misy zavatra vitsivitsy tokony hotadidinao rehefa manorina ravin-tranokala an-tranokala:
ataovy azo antoka fa mitazana voajanahary izy ireo, toy ny amin'ny hafa rehetra rohy;
Aza misalasala mampiahiahy an'i Google, aza ovay loatra ireny backlinks matanjaka ireny;
mifantoka amin'ny traikefa an-dahatsary amin'ny namana, mijery tsara ny votoatin'ny pejy ao amin'ny pejy;
mitazona ny fifandanjana tsara eo amin'ny backlinks ny tranonkalanao ary ny sisa amin'ireo teknolojia SEO tahaka ny fampiasana ny teny fototra tianao ho an'ny lohahevitra, ny fitazonana ny traikefa amin'ny mpampiasa mora ampiasaina, ary koa ny lanjan'ny ankapobeny ho an'ny mpihaino vondron'olona velona.
Nahoana no maivana be ny backlinks tranonkala?
Tsy misy filazana fa ny lohamilina eo amin'ny tranonkalan'ny tranonkala dia mahomby hatrany amin'ny rohy hafa. Tadidio anefa fa ny kalitaon'ny backlinks dia tsy avy amin'ny lazan'ny loharanom-baovao an-tserasera ihany. Midika izany fa ny lanjan'ny pejy tsirairay izay lazainy dia zava-dehibe ihany koa ary tokony horaisina foana koa. Amin'izany fomba izany, ny tranonkala iray dia matetika no olona malaza indrindra amin'ny tranonkala nomena azy, satria fotsiny hoe mety ho karaman'ny mpitsidika rehetra no hitsidika azy.
Ahoana no ahazoana azy ireo?
Raha heverinao ny maha-zava-dehibe ny rohy mankany amin'ny tranonkala fifaneraserana, andao hanandramantsika ny fomba tsara indrindra ahatongavana amin'izy ireo. Voalohany indrindra, azonao atao ny mangataka azy mivantana - na miatrika asa iray sarotra hamokarana votoaty avo lenta izay ampy handoavana azy irery, na mandoa vola be dia be ilaina mba hanaovana fifanarahana amin'ny backlinks tsara indrindra izay tsy maintsy azo antoka.
Raha manana votoaty tena matanjaka ianao, dia mety ho tsara vintana ianao raha te hahazo ny kalitao sy ny backlinks tena matanjaka. Na izany aza, raha ny marina, tsy azo inoana fa hitranga izany ka ny hahatonga azy rehetra ho avy amin'ny tranonkala tsara indrindra miaraka amin'ny fahefana ambony sy ny mari-pamantarana lehibe. Inona àry no tokony hatao raha tsy malaza ny tranonkalanao? Andeha hojerentsika izany - rehefa miezaka manatsara ny tetikasan-tranonkalanao ianao (na ireo fitaovana hafa mifandraika amin'ny SEO tsy mitongilana, tsy lazaina intsony ny toeran'ny tranonkala fifaneraseranao) dia manakarama mpahay siansa.
Raha ny marina, ny zotra dia azo zarazaraina amin'ny zon'olombelona irery, na dia mahay mahay kokoa aza izy.Midika izany fa amin'ny fampiasana tanteraka ny fampiasana azy, dia soso-kevitra ny hiatrika ireo tovolahy mavitrika mifandray tsara amin'ny tontolo SEO amin'ny taona faramparany. Izany no mahatonga ahy hino fa ny safidy tsara indrindra ho an'ny backlinks ny tranonkalanao dia ny manofana ireo manam-pahaizana, izay mahafantatra ny zava-drehetra ao an-tokantranony, ary manana ny fifandraisana manokana na tranonkala mahaleo tena miaraka amin'ireo domains ambony indrindra hampifandray ny tranonkalanao amin'ny Source .